Yenzani ilizwi lenu livakale ngolu hlaselo lwedemokhrasi – Grocott's Mail
You are at:Home»OPINION & ANALYSIS»Yenzani ilizwi lenu livakale ngolu hlaselo lwedemokhrasi
Yenzani ilizwi lenu livakale ngolu hlaselo lwedemokhrasi
Ngu SALLY PRICE-SMITH, usihlalo, Makana Residents’ Association (MRA)
Amaphepha ale veki anike ingxelo ngeziganeko ezothusayo kuMasipala waseMakana ezibonisa ukuba ubanjwe ngokupheleleyo kwaye incwadi yomthetho ikrazulwe.
Okokuqala ingxelo ekhutshwe nguSomlomo malunga neziphakamiso ezininzi eziphakanyiswe yi-DA kodwa azifakwa kwiBhunga.
Ngokuxolisa ngokuchaza okucacileyo kodwa indima ephambili yooceba kukubeka iliso kulawulo. Inkcazo “yesiphakamiso” kulo mxholo sisicelo esenziwe nguceba sokuba umcimbi uxoxwe kwintlanganiso yebhunga nokuba kuthathwe isigqibo. Sesinye sezixhobo eziphambili zokubeka iliso, igazi lobomi bebhunga elisebenza ngokuko.
Ngokumalunga nomba othile wokuba ingaba yindima yebhunga ukuthathela ingqalelo ukusebenza kuka-MM kwaye, kule meko ikhethekileyo, ukusilela okuvunyiweyo esidlangalaleni kwe-MM ekhoyo ngoku ngokusekelwe kwizimvo ze-SCOPA kunye nezobalulo zoluvo ze-AG ezintathu. Lolona xanduva lubalulekileyo lweBhunga ukuxoxa ngokuphendula kunye neziphumo ezinokuthi zibekho.
Ecaphula kwiZiko i-Dullah Omar: “Ibhunga likamasipala, ngokwedemokhrasi ngabahlali bakamasipala, linegunya lokutyumba umanejala kamasipala kwaye limgxothe ngenxa yokungaziphathi kakuhle. Isenokumnqumamisa emsebenzini umphathi kamasipala ngelixesha kusaqhuba uphando loluleko.”
Umbuzo ke ngowokuba kuya kwenzeka ntoni xa ibhunga, nokuba lityala elithe labonakala lisenziwa ngumanejala kamasipala, lingafuni ukumthathela amanyathelo loo mntu? Okokuqala, uxanduva luphezu kwabahlali, ngeekomiti zewadi, ukuba badlulisele ilizwi labo kumalungu ebhunga labo okanye ngqo kwibhunga. Le yimo yedemokhrasi kwinqanaba lengingqi. Ukuba abaphumelelanga, ayikokuphela kwebali. Amanye amaqumrhu namacandelo karhulumente nawo anendima ebalulekileyo ekufuneka eyidlalile.
Intetho yokuvala yeSithethi kwimpendulo yakhe ekhasayo ku-Cllr Embling kwinqaku lika-Grocotts esithi “ukutyekela kweziphakamiso kwintlanganiso yebhunga bekungayi kuvunyelwa,” kukuvuma ngabom noluntu ukuba kuthintelwe imigaqo-siseko yedemokhrasi. I-MRA iza kubhalela uSodolophu kunye ne-MEC CoGTA icela ukuba kuthatyathwe amanyathelo afanelekileyo kuze kufakwe uSomlomo endaweni yakhe njengoko ngokucacileyo akafanelekanga ukubamba le ofisi.
Umba wesibini ophazamisayo unxulumene nokusayinwa ngokungekho kwenkqubo kooceba be-MCF abangakhethwanga. Ikakhulu oku kubonisa ukungabahloniphi abavoti – kungakhathaliseki ukuba iinkokeli zalo naliphi na iqela zingacinga ntoni na malunga nezigqibo zalo, okanye ziziphi iingxabano zangaphakathi ezinokuthi zibe nazo – zithe zazisa isileyiti kubavoti kufuneka zime kwaye abo banyuliweyo mabanikwe ixesha lokwenza. umsebenzi abawucelile abantu ukuba bawenze.
Ooceba aba-5 be-PRMCF, uLungile Mxube, uJonathan Walton, uPhilip Machanick, uJane Bradshaw, uKungeka Mashiane bathiwe thaca kubavoti njengoluhlu lwe-MCF PR kunye nabanye abagqatswa ababini, uMxolisi Ntshiba noMncendisi Paphu ngosuku lokuvota malunga nama-38,000 eevoti. I-18% ye-MCF. Ezi voti zenziwe ngokusekelwe kulwazi oluthiwe thaca ngeendlela ezininzi, i-MCF Manifesto enkulu ngo-Okthobha, iminxeba emininzi kumajelo eendaba kwi- Amazwi, iingxelo zamaphepha-ndaba eziquka iGrocotts, uludwe olupapashiweyo lwe-IEC, iingxoxo ezininzi zikanomathotholo kwaye okona kubaluleke kakhulu kwindlu ngendlu kunye nokujongana ngqo kwiingxoxo kwiintlanganiso ezininzi. Aba baviwa babhenele kubavoti kwaye abavoti bavote ngokufanelekileyo, izithili ezili-18 zenze iivoti eziphezulu ze-MCF PR kuneevoti zabaviwa beewadi. Kufanelekile ukuqaphela apha ukuba aba ceba bebevakalisa ilizwi labo kwibhunga nakwizikhundla njengoko bekufuneka kubo.
Uluhlu olungakhethwanga nolubonakala lumele iminqweno yabo, u-Ayanda Kota kunye nabanye abambalwa abebehlanganisene kuMazwi neSoccer City ngamaxesha ahlukeneyo emva konyulo alukhange luthiwe thaca kubantu abavote kumashumi amathathu anesibhozo amawaka. Aba-3 bolu luhlu bebengabagqatswa beewadi abangaphumelelanga kwaye aba-2 bebengekho kulo naluphi na uluhlu kwaye bebengathathi nxaxheba kancinane kwiMCF ngexesha lokuqhutywa konyulo.
Ukuqukumbela – nceda wenze amazwi akho aviwe kwaye uvakalise uluvo lwakho ngayo nayiphi na indlela onokuthi ubenako. Zombini ezi ziganeko luhlaselo kwidemokhrasi oluthi ekugqibeleni lube nefuthe kulo naliphi na ithuba lokubuyisela iinkonzo ezithembekileyo kwaye luthintele ngokupheleleyo uMakana ekuphuhliseni uqoqosho.
Imibutho efana ne-MRA ibaluleke kakhulu kunangaphambili ngoko ke nceda ucinge ngokujoyina kwaye wongeze ilizwi lakho – ilizwi ngalinye libalulekile kwaye njengombutho wamalungu, okukhona sinawo amalungu kokukhona sinokukhwaza kwaye kokukhona sinokwenza okungakumbi.
Makana Residents Association usihlalo Sally Price-Smith
Previous ArticleIsithethi kunye noceba wewadi kwimfazwe yamagama malunga nenkqubo yebhunga
Next Article Calling the Speaker to order